ကင်ဒေါ့ကွမ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကင်ဒေါ့ကွမ်
Posted by ムラカミ on Jul 10, 2012 in Business & Economics, Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Creative Writing | 21 comments
နာမည်ရင်းက Kim Schmitz ပါတဲ့ ..အဲ့ဒါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်ဆော့ပီး
ကင်ဒေါ့ကွမ် Kim Dotcom အဖြစ် ပြောင်းထားပါသတဲ့ဗျာ …။
Kimble လို့လည်း လူသိများပီး နောက်ထပ်နာမည်ကတော့ ..
ကင် တင် ဂျင် ဗက်စတာ Kim Tim Jim Vestor ပါတဲ့
သူ့ရဲ့ လူသိများတဲ့ အချက်ကတော့ Megaupload ဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို
ထူထောင်မှုပါပဲ … Megaupload ဘာလဲ ကိုယ့်ဆြာ တို့ သိပါတယ်..
အဲ … သူ့အကြောင်း အသေးစိတ် အတင်းချချင်ပေမယ့် …သဂျီးက
အင်တာနက်ပေါ်မှာ မရမ်းရ လို့ ..ပြောထားတာ က တဂျောင်း …
စာရေးစာဖတ် အားဂျီး ပျင်းနေတာ က တကြောင်း ..နဲ့ နည်းနည်းပဲ ထပ်
အနှီ ပေါင် ၃၀ဝလောက်နီးနီးလေးတဲ့ အရပ် ၆ပေ ၆လက်မရှိ လူထွားကြီးဟာ
ဟောသည့် အမှုတွေ အတွက် ဆိုင်းငံ့ အပြစ်ရှိသူ ပါတဲ့
ကျွတ်ဆင်ကြီးနော …အဲ …
ဝန်ထမ်း ၁၅ဝကျော်လောက် ခန့်ထားတဲ့ ဟောင်ကောင် အခြေစိုက်
သူ့ file hosting website တွေကတော့
သည်နှစ် အစောပိုင်းက ဝီကီပိဒိယ ၁ရက်ကြာ အမှောင်ချထားတာ
မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါ့ …. အမေဒစ်ကင်န် အစိုးရရဲ့ …အင်တာနက် ဆင်ဆာရှစ်ပ် ကို
ဆန်ဒါ ပြတဲ့ အနေနဲ့ပါ ….။ အဲ …တိုက်ဆိုင်တာ(မဟုတ်) ၂ရက်အကြာမှာပဲ ..ကင်ဒေါ့ကွမ်
အဖမ်းခံရပါတယ်…သူ့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် www.megaupload.com ရဲ့ ကော်ပီရွိုက် ချိုးဖောက်မှုတွေ ကြောင့်ပါပဲ ….
ဘာမှမကြာဘူး.. အာမခံနဲ့ ပြန်လွတ်လာ ပါတယ်. … ပြောရရင် ..နည်းနည်း နားရှုပ်မယ် ထင်ရဲ့ ..
အလွယ်ပြောပါ့မယ်.. ဖိုင် ရှဲရင်း ဆိုက် တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ..ဆော့ဖ်ဝဲယား တွေ ဘာညာ ခွေတွေ
တင်ကြလေတော့ …အဲ့ဒါတွေကနေ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက် တဲ့ ဘက်ဦးလှည့်ခဲ့တာပါပဲ …နေ့စဉ် လူ
သန်း၅ဝလောက် အဝင်အထွက်ရှိနေပါသတဲ့ …။ ဒါဟာ အင်တာနက်တခုလုံးရဲ့ …၄% ရှိတဲ့
ပမာဏ လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်..။ Megaupload ကိုတော့ U.S. Justice Department ကနေ
ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက်နေ့က ခြင်းနင်း ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်..
အဲ ..ခိုးယူပစ္စည်း လက်ဝယ်ထားတာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာ .. မသမာတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ
ဒေဝါလီ (အင်) ခံတာ ..စတာတွေအများကြီး အတွက်လည်း နာမည်ဆိုး နဲ့ ကျော်ကြားသူပါ..
သည်လ အတွင်းမှာတော့ …ကမ်ဒေါ့ကွမ် ဟာ Spotify ကိုပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် Megabox
ဆိုတဲ့ .. music streaming service ကို စတင်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်… ဘာဖြစ်လာဦးမယ်တော့
ပြောပြချင်ပါသေးတယ်… ။ ဒါပေမယ့် မပြောတော့ပါ …သဂျီးက အင်တာနက်ပေါ်မှာ
သူများအတင်းမချရဝူး … မရမ်းရဝူး ဆိုလို့…။
သည်အကြောင်း ပြောပြရတာ သည်လိုပါ …
ဟိုတလောက ဟိုမင်းသမီးလေး ကောင်းတာတွေ လုပ်တဲ့ မူဗီ ပျံ့ပါတယ်…
ကိုယ့်ဆြာတွေလည်း သာဓုခေါ်လိုက်ကြရမှာပါ ….
အဲ့သည့်လို ကောလဟလ .. ကွန်ထရိုဗာရှယ် ..သူများ အတွင်းရေး … ကော်ပီရွိုက်.. (အဲလေ ..ဒါဂျီးကတော့
ဒါတွေ အားလုံး ရဲ့ …နောက်ကွယ်မှာ မီလျံဘစ်ဇနက် ဖြစ်သူတွေ မီလျံဘစ်ဇနက် နေကြပါတယ်…
လုပ်စားသူတွေ …ခံစားသူတွေ …ကိုယ့် သမိုင်းကိုယ်ရေးနေကြပါတယ်….
ကျုပ်တို့မှာတော့ ..အနှီ လူလည်ကြီးတွေ အရောင်ဆိုးသမျှ ခံပီး … ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး ငြင်းကြ…
ဆဲကြ ..ရှဲ ကြ ..ဖွကြ ပွကြနဲ့ ….
အော် …ကိုယ်လည်း တပြားမှ ရတာလည်း မဟုတ် ….။
သူတို့တွေရဲ့လုပ်ကွက်တွေ ကတော့လိုက်မမှီလို့ နားမလည်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ဟိုမင်းသမီးလေးရဲ့ ကောင်းကြောင်းတွေကတော့ ….တော်တော်လေး…
ဟိုုမင်းသမီးလေးတော့ ကောင်းရှာပါတယ် ပါ့၂ ကနည်းနည်းဝါးတာတစ်ခုုပဲ ဘာတဲ့ လူသတ်နေသလိုုပဲတဲ့ ဟိဟိ ကြားမိတာကိုုပြောဒါဘာ
ကောင်းတာလုပ်တဲ့ဇါတ်လမ်း၂ပိုင်းကတော့ ဘီးစီးနပ်မင်းတွေကောင်းမှုနဲ့ ခွေဆိုင်တွေမှာ ပလူပျံနေပေါ့
သရုပ်ဆောင်ခအတွက် တရားစွဲသင့်လားလို့ တိမ်တိမ်တွေးမိတာ
အဲ့ဂယက်က အတွင်းလှိုက်စားမယ့် သဘောရှိရဲ့ဗျာ …
သူကလေးရဲ့ အရင်တယောက်နဲ့ အခုတယောက်က
ခေသူတွေမဟုတ်ကြလေတော့ …အင်း …
(အတင်းပြောသလို လည်း ဖြစ်နေပါဦးမယ်လေ…)
ဇဂါးမစပ် ..သက်ဆိုင်တာလား တိုက်ဆိုင်တာလားတော့မသိ..
နာမည်ကျော် ဖိုလမ် ဒွေတော့ ဗျင်းခံထိသွားကြရှာပီ ….
သူလေးအကြောင်း လျှော့ပြောမှ ….
သူများအတင်းမချရဝူး … မရမ်းရဝူး ဆိုလို့..
ဖရီမီယံ ဘစ်ဇနက် မော်ဒယ် ပါ….
ဘာမဆို အကုန် ဖရီးပေးမယ်.. အဲ ….
လစ်မစ်တော့ ရှိတယ်… မစို့မပို့ ကျွေးပြီး..
အဆီတွေ အသားတွေ အနှစ်တွေ ကို
မစားရဝခမန်း ပြထားမယ်… ဖရီးကနေ ..
ပရီမီယံ ဝယ်အောင် အသည်းယားအောင် လုပ်ထားမယ်..
ကာဒါရှိယန်း သို့ အလည်တခေါက် တို့ …ပါရီမြို့မှာ တညတာ တို့က
သိပ်ကျော်ကြားခဲ့သပေါ့ … (HD ကွာလတီဒွေကိုး)
အိပ်ပျက်ခံ မစို့မပို့စပိနဲ့ ဒေါင်းနိုင်ရင်ဒေါင်း..
မဒေါင်းနိုင်ရင် အကောင် လေးတွေ ပါမယ့် ..
မီးနံရံဖောက်တဲ့ အပ္ပလီ လေးဒွေ သုံးချင်သုံး…
အဲ ..မခံဇား နိုင်ရင် ဝယ်တော့ပဲ …
ဝမ်းကလစ် ကိုး ဗျ …..
အော် ..လူလည်ဂျီးတွေ စီးပွားရှာတာ ..များပြောပါတယ်…
ရုတ်ရုတ်မလုပ်နဲ့ ဆွဲထလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အပေါက်ကြီး..။
အရင်က တကယ် မသိခဲ့ဘူး။
သူ့အကြောင်း အချိန်ရခဲ့ရင် အသေးစိတ် အတင်းချဖို့
လူကလည်းကြီးသလို ပညာကလည်းကြီးပါပေတယ် ……..ခုလောမအားတာကြောင့် နေရာမဦးရတော့ဘူး .. လာပါဦးမယ် လာဦးမယ် ……..
ငို၍ ရယ်၍မရသော မျက်နှာ ဆိုတာ ..
ကင်ဒေါ့ကွမ် ဆိုတော့ Kim.com လို့ ဆိုချင်တာလား။
မှန်ရာကို ဝန်ခံရရင်တော့ ခုမှ ကြားဖူးတာ .. ဟီး. အဲ့လို ဗဟုသုတကြွယ်တာ။
နောက်တခုက အင်တာနက် ဥပဒေပေါ့။ ဒီမှာ ကြားတောင် မကြားဖူးသေးသလို ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုတွေ ပြဌာန်းမယ်ဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကော်ပီရွိက်ကတော့ သပွတ်အူလို့ထင်တာပဲ။ ဘယ့်နှယ့်လုပ်ကြမယ်မသိ။
ပြီးခဲ့ ရ လပိုင်း ၂ ရက်နေ့ကတော့ စင်္ကာပူ သတင်းတခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတာကတော့ ၁ရ နှစ်နှစ်အရွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား ယောက်ျားလေး ၂ ယောက်ကို အင်တာနက် မှာ လူမျိုးရေးလှုံ့ဆော်မှု ခွဲခြားမှုလို စာမျိုးရေးမိလို့ ဖမ်းသွားတယ် ပြောတယ်။
သူတို့ဥပဒေမှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ တစုံတဦးကို ထိခိုက်အောင် နစ်နာအောင် နဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အထိကရုဏ်းကို ဦးတည်နိုင်တဲ့ မီးထိုးပေးတဲ့ စာမျိုး ခွဲခြားမှုမျိုးကိုတော့ လက်မခံပါဘူးတဲ့။
တည်ဆဲဥပဒေအရာ မသေးလှတဲ့ ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံရမယ် ဆိုပါတယ်။ အားကျမိတာက အင်တာနက်မှာ ကျုးလွန်လိုက်တာကို အိမ်တိုင် ရာရောက်သွားဖမ်းနိုင်တဲ့ ဥပဒေ သက်ဝင်နေအာင် ပြဌာန်းပေးထားတာရော နည်းပညာကောင်းတာရော ကိုပါ။ ဒီမှာလည်း ဒီလို ဥပဒေမျိုးတွေ သက်ဝင်လာရင် အင်တာနက်ကနေ မီးထိုးပေးတဲ့ စာတွေ ပြသာနာတွေ နည်းသွားမယ် လို့ ထင်မိလို့ပါ။
သို့သော် ဒီလိုမျိုး ကင်ဒေါ့ကွမ်လို လူမျိုးတွေကလည်း ရှိနေပြန်သေးတယ် ဆိုတော့…
မယ်ပုတောင် မသိဘူးဆိုတော့ ကိုယ်မသိတာ မလွန်ဘူး (ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖော့တွေးထားသည်။)
ပုံကို ကြည့်ပြီး မာဖီးယား ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်လို့တောင် ထင်သွားတယ်။
ဓါတ်ပုံတော့ မြင်ဘူးတယ်…..နာမယ်တော့ခုမှပဲသိတော့တယ်… ရှဲရှဲ
သူ့ကြည့်ပြီး နာတို့ရဲ့ ကြောင်ဝတုတ် ကို ဘဲ ပြေးပြေး မြင်နေတယ်။
အဲဒီ ရွာထဲက ကြောင်က ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီးတော့ကို သရမ်းတာ
(သို့) ကြောင်ဒေါ့အော့ဂ်. (kyaung.org)
ကျွန်တော်လည်းခေတ်သိပ်မမှီတော့ မသိပါဘူး ပုံကတော့မိုက်တယ်ဗျ……….
ဆိုုး t says:
ဟိုုမင်းသမီးလေး ပါ့၃ကြည့်ပီးပလား… :D:D:D
စာတွေအများကြီး ရှာဖွေဖတ်ရှု့ပြီးမှ ရေးတာဖြစ်ပေမယ့် လိုက်မမှီလို့ ပြန်လှန်မဆွေးနွေးနိုင်တာ ကြိုးစားပမ်းစား ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကိုတောင် အားနာမိပါရဲ့။
တစ်ဦးတည်းသော သား ဆိုတော့
ကင်ဒေါ့ကွမ်….လက်ဝှေ ့တက်ထိုးလို ့ရတယ် ……
min mg says:
နပန်းသမား တော့ သေချာဖြစ်တယ်။